हिन्दुजातीय उत्श्रृङ्ख*लता र संस्कृतभाषा «
हिन्दुजातीय उत्श्रृङ्ख*लता र संस्कृतभाषा
प्रकाशित मिति : 19 May, 2020 8:29 pm
संस्कृतभाषा पनि हाम्रै निधि हो । यसलाई मर्न दिनुहुँदैन, विद्यमान सबै भाषाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ । तर संस्कृतभाषा जगेर्ना गर्ने नाममा राज्य एपक्षीय हुनुहुदैन । आज नेपालमा संस्कृतभाषाको लागि राज्यले आवस्यकता भन्दा बढि महत्व दिएर बालुवामा पानी हालिरहेको छ । संस्कृतभाषाको लागि छुट्टै विश्वविद्यालय खोलिएको छ । त्यसमा पनि अझ विद्यालय स्तरमा संस्कृत पढाउने नीति सरकारले ल्याउनु भनेको हिन्दुआर्य जा*तीय उत्श्रृङ्खलता हो, जातीय सद्भाव खलल पार्ने नीति हो ।
संस्कृतभाषा : संस्कृतभाषा हिन्दुआर्यहरूको विगत पुर्खाको भाषा हो । वर्तमान अवस्थामा कर्मकाण्डीय काममा पुरेतले मन्त्र उच्चारण गर्नुबाहेक बाहिर प्रचलनमा छैन । व्यावहारिक हिसाबले यो भाषा प्रायः मृत झै छ । तर पनि यो भाषालाई अतिरञ्जित तवरले बढाइचढाइँ गरिने गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन र ज्ञानको भण्डार भनेर राज्यले काखी च्यापेको छ ।
राज्यको भाषिक पक्ष*पात : संस्कृत भाषा, साहित्य र दर्शनको माध्यमबाट हिन्दुधर्मको संरक्षण गर्नको लागि नेपालमा वि.स. २०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यायल स्थापना गरियो । यसको १४ वटा आंगिक र ११ वटा सम्बन्धनप्राप्त गरी जम्मा २५ वटा विद्यापीठ छन् । यी विद्यापीठहरूमा डिग्रीसम्मको पढाइ हुन्छ । तर विद्यार्थी भने जम्मा ४ हजार जति हुन्छन् । संस्कृत विश्वविद्यालयको लागि राज्यले करडौँ रूपैयाँ छुट्याउँछ । यो विश्वविद्यालयको लागि यति धेरै रकम छुट्याइएको हुन्छ कि १ जना विद्यार्थीको लागि सरकारले १ लाख ७० हजार वर्षमा लगानी गर्छ । ७२/७३ सालमा मात्र ५६ करोडा वार्षिक बजेट छुट्याइएको थियो । यति मात्र होइन, महिनामा ९ हजार छात्रवृत्ति विद्यार्थीलाई दिइन्छ ।
संस्कृतभाषा ज्ञानको भण्डार होइन : संस्कृतभाषामा कुनै त्यस्तो ज्ञानविज्ञानको कुरा लेखिएको छैन । कुनै महान दर्शन पनि संस्कृतमा लेखिएको पुस्तक छैन । संस्कृतमा लेखिएका पुस्तकहरू हिन्दुधर्मसंग जोडिएका ग्रन्थहरू हुन् । जहाँ मिथ र उडन्ते कुराबाहेक अरु केही छैन । मनुस्मृति जस्ता मानव सभ्यताको कलंकित ग्रन्थ संस्कृतमा छ । महाभारत, रामायण र पुराणहरू कोरा मिथ हुन् जसको मानव प्रगतिमा कुनै योगदान छैन् ।
संस्कृत भारतीय महाद्वीपमा आउनुभन्दा अगाडि पाली भाषा थिए । महान दार्शनिक गौतम बुद्धले संस्कृतमा प्रवचन दिएको होइन । बुद्धले पालीभाषा प्रयोग गर्दथे । भारतमा पालीभाषाको प्रचलन थियो । बुद्धकालमा संस्कृतभाषा प्रचलनमा भएको भए बुद्धले संस्कृतमा प्रवचन दिन्थे । पाली भाषा यहीको रैथाने भाषा हो । थुपै पालीभाषाका शब्दहरू संस्कृतकरण भएको छ । बौद्धदर्शनका ग्रन्थहरू पाली भाषामा लेखिएका हुन् । त्यसलाई पछि संस्कृत भाषामा उल्था गरिएको हो ।
हिन्दुदर्शन र संस्कृत ग्रन्थ : भारतीय महाद्वीपमा दुई दर्शन छन् । ती हुन्ः नास्तिक र आस्तिक । आस्तिक दर्शनमा हिन्दुदर्शन पर्छ किनकि यसले आत्माको अस्तित्वलाई स्वीकार्छ । उता नास्तिक दर्शनमा बुद्धिजम, जैन, आजिविक, अज्ञान र चार्वाक पर्दछन् ।
दिमागलाई वैज्ञानिक ताजकी प्रदान गरिरहने हिन्दुदर्शनमा त्यस्तो कुनै खुराक पाइँदैन । प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरूको हाराहारिमा पुग्ने कुनै दार्शनिक हिन्दुसमाजमा जन्मिएन । जुनसुकै दर्शन भनेको तार्किक भ्रम हो जसमा कुनै परिक्षणको वैज्ञानिक विधि अपनाइन्न । यो एउटा जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमात्र हो । यसमा जसलाई जसरी सोच्न र चिन्तन गर्न छुट हुन्छ ।
संस्कृत ग्रन्थ प्राचीन होइन : संस्कृतभाषा पुरानो हुनसक्छ तर यो भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरू प्राचीन होइनन् । वेद र धर्मशास्त्रलाई श्रुति र स्मृति भनिन्छ । यसको अर्थ मौखिक रूपमा सुन्दै आएको र स्मरण गर्दै आएको भन्ने हो । पछि लिपिको आविष्कार र विकास भएपछि मात्र त्यसलाई लिपिबद्ध गराएर ग्रन्थ तयार पारिएको हो ।
भारतीय उपमहाद्वीपमा संस्कृत भाषा पुरानो होइन । हिन्दुआर्य आप्रवासीको रूपमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै यहाँ आदिवासीहरूको भाषा थिए । हिन्दुआर्यहरू भारतीय द्वीपमा ई.पू. ११/१२ शताब्दी तिर आएको कुरामा विद्वानहरू एक मत छ । गंगानदीको आसपास जमेर बसेको ई.पू. ७ औँ शताब्दी मात्र हो । उनीहरूको नेपाल आगमन त धेरै पछिमात्र हो । यसरी संस्कृत ग्रन्थहरूलाई अति प्राचीन हो भनेर भन्नु हास्यास्पद कुरा हो ।
प्राचीन इतिहासअध्ययन र सँस्कृत : नेपालको प्राचीन इतिहास अनुसन्धानमा सँस्कृत भाषाका ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरा भ्रम हो । बरु किरातभाषाको अध्ययनमा दखल भएन भने नेपालको इतिहास उजागर हुन सक्दैन । नेपालको इतिहास अध्ययनमा त्यस्ता गैर–संस्कृत शब्दहरू छन् जसको अर्थ बुझ्न नसक्दा इतिहासमा लगत अर्थ लागेको छ । किरात भाषाको कुथेर, शुल्ली, लिङ्वल, मापचोप जस्ता शब्दकोे अर्थ विद्वानहरूले लगाएर अलिकति भएपनि प्राचीन किरात प्रशासन शैलीको उजागर हुन सक्यो । अन्य त्यस्ता थुप्रै किरातशब्दहरूलाई जसलाई सही अर्थ लगाउन सकिएको छैन । कोली, द्रङ्ग, कोङको, हुस्प्रिन्दुङ, तेङ्खु जस्ता थुप्रै किरातशब्दहरूको अर्थ लागाउन सकिएको छैन । यसको लागि संस्कृत भाषाविद होइन, किरातभाषाविज्ञ नै चाहिन्छ । भारत तथा नेपालको प्राचीन इतिहास थाहा पाउन संस्कृत होइन, यहीको आदिवासी भाषाको ज्ञान हुन आवस्यक छ ।
हिन्दुसमाज सभ्यता होइन, सँस्कृति हो : सभ्यता (सिभिलाईजेसन) भनेको साँस्कृतिक विकास तथा संगठनको उच्च तथा परिस्कृत अवस्था हो । सभ्यता भनेको उन्नत विकसित अवस्था हो । के हिन्दुसमाजलाई उन्नत तथा परिस्कृत भन्न सकिएला ? यहाँ अहिले पनि जातप्रणालीको आधारमा छुवाछुत हुन्छ । हिजोसम्म नारीलाई सतीप्रथाको नाममा ज्यूँदै ज*लाइन्थ्यो ? जसले उचोनीच सामाजिक संरचना बनाएर समाजलाई यथास्थितिमा राखिन्छ, त्यसलाई सभ्यता भन्न मिल्छ ? जहाँ पुरातन जातीय संस्कारको आधारमा न्याय सम्पादन हुन्छ त्यहाँ सभ्यता हुन्छ ? पशुको मासु खानेलाई जे*ल र पशुको मुत्र खानेलाई पवित्र ठानिने समाज के सभ्य समाज हो ? एकल जा*तीय प्रभुता कायम गरिरहेर मुलुकलाई द्व*न्द्व तथा अनिश्चिततातर्फ धकेल्नु सभ्यताको कार्यसुची हो ? वि*भेद र अ*न्यायलाई सधै प्रश्रय दिने कुरा सभ्यता भित्र पर्दैन । त्यसकारण हिन्दुसमाज एक सँस्कृति त हो, तर सभ्यता होइन ।
संस्कृतभाषामा अध्यापन : यदि संस्कृत भाषालाई स्कुलतहमा पढाइने हो भने संस्कृत विश्वविद्यालय खारेज गरिनुपर्छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको लागि राज्यले करडौँ लगानी गरिरहेको अवस्था छ । त्यो राज्यको कोषमा चेपाङ जातिको गाँस पनि काटिएको छ । त्यहाँ राउटे जातिको पसिना पनि सिंचित भएको हुन्छ । दुवै स्कुल तहमा पनि र विश्वविद्यालय तहमा पनि अरबौँ राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने एकलौटी अधिकार यो बाहुनराज्यलाई छैन । यो देशका मौलिक आदिवासी भाषाबारे सरकारलाई चासो छैन, तर मृतभाषाको लागि ज*बरजस्ती दुइदुई तहबाट पढाउन खोज्नु कहाँको न्या*य हो ?
अन्यभाषालाई वेवास्ता गरेर संस्कृतभाषालाई यसरी बढुवा दिन खोज्नु भनेको हिन्दुजा*तीय सा*म्प्रदायिकता हो । अन्यभाषाभाषी माथि चरम द*मन र वि*भेद हो । यो लोकतन्त्रको उ*पहास हो ।
बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ -बिश्लेषक, लेखक ‘जा*तियमुक्ती र लोकतंत्र’ अनुवादक ‘क्रुसमा नमरेका बौद्धमार्गी जिसस क्राइष्ट’ (फेसबुक) बाट लिएको हो । बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नेता हुन (लेखकको निजी बिचार हो । )